Amai Beatrice Mtetwa Vanoti VaTomana Ngavaferefetwe
Magweta ari kumirira mubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, anoti ari kuda kuti matare aferefete muchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, nenyaya yekushandisa hofisi yavo nenzira isiri iyo, uye kuzvidza dare.
VaTomana neChitatu vakakwira kudare vachipikisa mutongo wakapihwa nedare reHigh Court wekuti VaBennett havana mhosva yavakapara muna 2006 apo vaipomerwa mhosva yekuda kuita mutungmiri wenyika, VaRobert Mugabe, kafiramberi.
Hofisi yemuchuchusi mukuru yakati mutongi weHigh Court, VaChinembiri Bhunu, vakaresva pakusanyatsotarisa nemazvo nyaya yaipomerwa VaBennet, nekudaro vari kuda kuti dare repamusoro soro rizeye nyaya iyi.
Asi gweta raVaRoy Bennett, Amai Beatrice Mtetwa, vaudza Studio7 kuti hofisi yaVaTomana yakatora pasipoti yaVaBennett vachizvidza dare.
Vatiwo maitiro aVaTomana panyaya iyi haachisiri emuchuchusi, asi kuti vava kuisa zvematongerwo enyika.
Zvichakadaro, chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, uye vari mutongi gava pagakava remuZimbabwe, VaJacob Zuma, Muzvare Lindiwe Zuma, vaudza Studio7 kuti vachataura neZanu-PF kuti vaone kuti nyaya yaVaBennett haingagadziriswe here nechimbichimbi.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti VaZuma, vari kuda kuti VaBennet vatoreswe mhiko semutevedzeri wegurukota rezvekurima, uye havasi kufara nenyaya yekuti vave kuendeswazve kumatare.
Nekowo MDC inoti iri kuda kuti mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vataure naVaMugabe nezvenyaya yaVaBennett neMuvhuro pavari kutarisirwa kutaurirana.
VaNelson Chamisa ndivo mutauriri weMDC. VaChamisa vanoti vanotambira nemufaro danho rotorwa neSouth Africa panyaya yaVaBennet.
Zvichakadaro, bato reMDC rinoti imwe nhengo yaro, VaShakespear Maya, avo vakambotungamira bato re NAGG, vave kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti vabvise VaMugabe nechisimba, kana kuti sedition.
VaMaya vanonzi vakataura mashoko aya muna 2005 ku St Mary’s kuChitungwiza. Asi VaMaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
VaMaya vakatombogara mutirongo kwemazuva maviri svondo rapera, uye vanzi vauye kudare mukutanga kwemwedzi unouya.
VaPedzisayi Ruhanya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari Programmes Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition. VaRuhanya vanoti hurumende yave kushandisa matare kutyisidzira vanopikisa.